Koreen Noobeel Kan Norweey Ibsa Baase
Muummeen Minsitriaa Abiyyi Ahimad badhaasa Noobeelii yeroo fudhatanitti (suuraa faayilii)
Badhaasa Noobeel ka nagaa bara 2019 kan argtan mummichi minsteeraa Abiyyi Ahamd walitti bu’iinsa biyya isaanii keessaa xumuura itti tolchuuf akkasumas nagaa buusuuf itti gaaftama addaatu irra jira jechuun koreen Noobeel kan biyya Norweey,ibsa baasee jira.
Baatii Sadaasa bara 2020 kaasee muddamsii Itiyoophiyaa keessaa hammaatee gara wal waransa guddaatti seenamee ture kan jedhe ibsii kun, rakkoon gargaarsa dhala namaa hamaa akka jiru, gargaarsii nyaataa guddaan kanneen isaan barbaachisu dhaqqabuu dhabuun immo waan fudhatama hin qabne jedhee jira.
Mummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad bara 2019 badhaasa Nobeel kan nagaa arachuun yeroo sanatti, yaalii gochaa turan irratti hirkachuun akkasumas waan gaarii fi fudhatama qabu hojjataniif ta’u kan beeksisee ibsii kun, yaada nagaa buusuu dhiyeessaniin Ertraa waliin nagaan argamu ibsa.
Kana malees, yaada siyaasaa bal’aa kan waa’ee Demookraasiif akkasumas kabajamuu mirga sivilootaaf dhiyeessanif ta’u ibsee,Duddubbeen seenaa biyyatti, caasaa mootummaa abba irree fi walitti bu’iinsa gosootaa bal’inaan gaggeeffamaa ture jechuun ibsii koree Noobeel kan Norweey ibsee jira.
Kana malees koreen kun , dhimmoota ijoo badhaasii Nobeel kan Nagaa akka mummicha ministeeraa Abiyyi Ahamadiif kennamuu taasiisan, kan yeroo sirna badhaasichaa irratti dubbatamee irraa kan hafee, ifatti ibsa kennuu hin dandeenye jedha.
Hojiin badhaafamaa filachuuf gaggeeffamuus iccitiin kan deemsifamuu waan ta’eef,
Kana malees, erga badhaasa sana kenninee boodas, haala Itiyooophiyaa keessaas ta’e haala badhaafamaa Sanaa itti fuufnee ibsa kennuun qooda ykn itti gaafata keenya mitii jechuun koreen Noobeel kan Norweey ibsa isaa baasee Kanaan beeksisee jira.